သက်တန့်ချို: ဒီစစ်ပြီးတဲ့အခါ . . .
မိုးနတ်ကြယ်စင် February 4, 2013 at 8:46 PM
ဒီစစ်ကြီး ပြီးတဲ့ အခါကျရင် မိုးနတ်လဲ
အငိုတိတ်ဖို့ မျှော်လင့်နေတယ် ကိုယ့်ကိုယ်
ကဗျာကို အရမ်းကြိုက်လို့ facebook မှာ တင်ခွင့်ပြုပါ
သစ်နက်ဆူး February 9, 2013 at 12:51 AM
စာနာမှု၊ ထွင်းဖောက်မြင်နိုင်မှုအပြည့်နဲ့ရေးစပ်ထားတဲ့
တစ်ကယ့်ကို ကောင်းတဲ့ ကဗျာကောင်းတပုဒ်မို့ချီးကြူးပါ၇စေဗျာ...။
စစ်ဖြစ်တော့မှလူသေ ဘဝသေတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ပညာရေး ဘက်မှာလဲ ပါမောက္ခတွေရဲ့ အာဏာပြ ပညာတွေကြောင့် ၂/၃ ခါကျ ကျောင်းသားတွေ ရှိနေသလို ငါလိုရာဆွဲယူစည်းကမ်းတွေသုံးပြီးဖိနှိပ်ခံ ဆရာမတွေလဲရှိနေပါတယ်။ ပညာတတ်တွေ က တဘက်သားစိတ်ကို သေ/ရှုံး တဲ့အထိ ညှင်းဆဲနိုင်ပါတယ်။
မငုံ February 20, 2013 at 12:21 AM
ကဗျာကောင်းလေးပါ။ စစ်ဆိုတာ ဘယ်သူ့ကိုမှ ကောင်းကျိုးမပေးပါဘူး။ အလယ်ကမြေဇာပင် ဖြစ်ရတဲ့သူတွေကို သနားတယ်။ သွေးမြေကျမှ အနိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဖြစ်သွားခဲ့ရင်တောင် အပြစ်မဲ့သူတွေမျက်နှာကို အရင်ငဲ့ပါ။ အပြစ်မဲ့ခံရသူကော၊ နှစ်ဖက်သောသူများမှာကော မိသားစုနဲ့မလား.ဘယ်သူက သေကွဲရှင်ကွဲ ခွဲချင်ပါ့မလဲ..
ko pyae sone November 26, 2013 at 8:30 PM
war is not good for anyone.especially the soldier who fight in this war know the side effect of war.we left our family away and go to the way where we cannot know which time we come back.we also do not we can back home with soul or not.we fight to enemy whom we did not met at least one time.but people hate our soldier only.please understand us about we are also human with heart not devils.
ko pyae sone November 27, 2013 at 6:03 PM
every war is bad.especially soldiers who fought between war more know about this.we left our home,parents and love.we go to place from where we not sure to come back alone with life.our soldiers are also human but people hate,,blame only us.please understand us.